2009-09-06 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျွန်​တော် ​ဆွေး​နွေး​ကြည့်​ပါ့​မယ် .. Ram ​တွေ​ဟာ ​မ​တူ​တာ​တွေ​ကို​တော့ ​စိုက်​လို့​မ​ရ​ဘူး​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး ​စိုက်​လို့​ရ​ပါ​တယ် .. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ရည်​ရှည်​မှာ​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​နိုင်​ပါ​ဘူး .. Ram ​ရဲ့​သ​ဘော​တ​ရား​က ​မူ​ရင်း​ကို ​နှစ်​ဆ​ပွား​တာ​ပါ .. 16 x2= 32 x2= 64 x2=128 x2= 256 x2= 512 x2= 1 GB x2=2GB x2=4BG x2= 8 GB x2= 16 GB x2= 32 GB x2= 64 GB ​အဲ့​လို​မျိုး​လေး​ပါ ... ​အဲ့​ဒီ့​သ​ဘော​က ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ memory ​ပ​မာ​ဏ ​တူ​ညီ​တာ​တွေ​ကို ​ပေါင်း​ပြီး​စိုက်​ရင် ​စက်​ရဲ့ ​လုပ်​ဆောင်​မှု ​ပို​မို​မြန်​ဆန်​လာ​ပါ​တယ် .. ​မ​ယုံ​ရင်​စမ်း​ကြည့် . ​မ​တူ​တာ​ကို​စိုက်​ပြီး program ​ကြီး​ကြီး ၂ ​ခု​လောက်​ကို​ဖွင့် .. ​တူ​တာ​နှစ်​ခု​ကို​စိုက် program ​ကြီး​ကြီး ၂ ​ခု​လောက်​ကို​ဖွင့် ​ဘယ်​ဟာ​မြန်​မ​လဲ​လို့ photoshop ​နဲ့ coral draw ​အဲ့​ဒီ့​နှစ်​ခု​ကို ​ဖွင့်​ပြီး​စမ်း ... ​အဲ​စမ်း​ဆို​လို့ ​မ​တူ​တာ​နှစ်​ခု​ကို ​စမ်း​လို့ board ​ကြောင်​ပြီး ​တစ်​ခု​ခု​ဖြစ်​ရင်​တော့ ​ကျွန်​တော်​နဲ့​မ​ဆိုင်​ဘူး​နော် .. service ​လုပ်​တယ်​ဆို​တာ ​အ​ပြော​လွယ်​ပေ​မယ့် ​ကြုံ​တွေ့​ရ​တဲ့ ​ပြ​ဿ​နာ​တွေ​က​တော့ ​အ​မျိုး​မျိုး​ပါ​ဘဲ .. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ရုန်း​ရ​တဲ့​စက်​ရဲ့ ​လုပ်​ဆောင်​မှု​အား​ချင်း​က Valence ​မ​မျှ​တာ​ကို​ပြော​တာ​ပါ . ​ဥ​မာ​တစ်​ခု​ကျွန်​တော်​ပေး​ကြည့်​ပါ့​မယ် . ​အား​သန်​တဲ့ ​နွား​တစ်​ကောင်​နဲ့ ​အား​နဲ​နေ​တဲ့​နွား​တစ်​ကောင် ​နွား​ချင်း​တော့​တူ​ပါ​တယ် . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သူ​တို့​နှစ်​ကောင်​ကို ​လှည်း​တစ်​စီး​တည်း​မှာ ​တပ်​ပြီး​မောင်း​ကြည့်​လိုက် . ​အား​သန်​တဲ့​နွား​က​တော့ ​ရုန်း​မှာ​ပဲ​လေ . ​အား​မ​သန်​တဲ့​နွား​က ​သိပ်​မ​ရုန်း​နိုင်​ဘူး . ​ဒီ​စက်​မှာ​လုပ်​ဆောင်​တဲ့ ​လုပ်​ငန်း​တွေ​ကို ​လှည်း​အိမ်​လို့​သ​ဘော​ထား​လိုက် . ​ကဲ​စိတ်​ကူး​နဲ့​မောင်း​ကြည့်​ဗျာ . ​ရှေ့​က ​သန်​တဲ့​နွား​ရုန်း​တိုင်း ​နောက်​က ​လှည်း​က​လိုက်​လား . ​မ​လိုက်​ဘူး​ဗျ . ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​သန်​တဲ့​နွား​က​သာ ​အ​တင်း​သွား​နေ​တာ ​အား​နည်း​တဲ့​နွား​က​တော့ ​သူ့​အား​ရှိ​သ​လောက်​က​လေး​ပဲ​သွား​တော့ ​လို​ရာ​ခ​ရီး​ကို ​မ​ရောက်​တော့​ဘူး​ပေါ့ . ​ကြာ​လာ​ရင် ​အား​သန်​တဲ့​နွား​ပဲ ​ပို​ပင်​ပန်း​မှာ​ပဲ​လေ . ​အား​နည်း​တဲ့ ​နွား​နှစ်​ကောင်​ဆို​ရင်​တော့​လဲ ​လှည်း​က ​အ​ချိန်​မှန်​မှန်​နဲ့ ​အိ​ပဲ့​အိ​ပဲ့​သွား​နေ​မှာ​ပါ . ​တစ်​ကောင်​က ​ရှေ့​ကို​ရောက်​လိုက် ​နောက်​တစ်​ကောင်​က ​နောက်​မှာ​ကျန်​နေ​ခဲ့​လိုက် ​မ​ဖြစ်​တော့​ပါ​ဘူး .. ​အ​ခု Ram ​ရဲ့​သ​ဘော​တ​ရား​က​လဲ ​အဲ့​လို​ပါ​ပဲ .
For Video: ​အ​ကို​ရယ်... video ​တစ်​ခု ​ကို​ခွဲ​ကို​လေ ​အ​သံ​တစ်​ခု၊ ​ရုပ်​ပုံ​တွေ ​တစ်​ခွဲ​တဲ့​ဆော့(စ်)​ဝဲ ​ရှိ​လား... Video ​တစ်​ခု​ကို​လေ ​အ​သံ​ဖိုင်​တစ်​ခု။ ​ရုပ်​ပုံ​တစ်​ခု​ဖြစ်​သွား​အောင်​ခွဲ​တဲ့ ​ဆော့ (စ်) ​ဝဲ​ရှိ​လား.... ​ရှိ​ရင် ​ပြော​ပြ ​ပေး​ပါ​ဦး​နော်...
​အ​လွယ်​ဆုံး​နည်း​နဲ့ ​တစ်​ခု​ပြော​ပြ​လိုက်​ပါ့​မယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့​တွေ window xp ​သုံး​နေ​တယ်​ဆို​ရင် window movie maker ​ကို​တော့ ​သိ​ကြ​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော် window movie maker ​နဲ့ ​လုပ်​ပြ​ပါ့​မယ် .
(၁) Start >> Programs >> windows movie maker ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ .
(၂) File >> Import into collections ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၃) ​မိ​မိ ​လုပ်​မယ့် ​ဖိုင်​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ .
(၄) ​ပြီး​ရင် ​ပေါ်​လာ​တဲ့ movie file ​ကို ​အောက်​မှာ ​ရှိ​တဲ့ audio frame ​ထဲ​ကို ​ဆွဲ​ထည့်​လိုက်​ပါ​မယ် . movie frame ​ထဲ​ကို ​မ​ထည့်​မိ​ပါ​စေ​နဲ့ ..
(၅) File >> save video file ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၆) ​အ​ခု​ရ​လာ​မယ့် ​ဖိုင်​ကို ​တစ်​နေ​ရာ​ရာ​မှာ ​သိမ်း​လိုက်​ပါ .
​ကဲ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် . ​အောက်​မှာ ​ပုံ​တွေ​နဲ့ ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .
​အိုင်​တီ​ခ​ရီး​သည်: ​ကို​ညီ​ရေ.. ​တစ်​ခု​လောက်​မေး​ချင်​လို့​ပါ. ​ကျွန်​တော့ ​စက်​က Firefox ​မှာ ​ပို့စ်​တင်​တဲ့​အ​ခါ Link, Add image ​တို့ font option ​တွေ​က​အ​စ ​ဘာ​တစ်​ခု ​မှ ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ်​ဗျာ.. ​ပို့စ်​တင်​ချင်​ရင် IE ​နဲ့ ​တင်​နေ​ရ​တယ်.. ​ဘာ​ကြောင့် ​ဖြစ်​နိုင်​လဲ​ဆို​တာ ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ခင်​ဗျာ..
​ကျွန်​တော့်​အ​ထင် virus ​ကြောင့် ​ဖြစ်​ဖို့​များ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော် ​ပို့စ်​အ​သစ်​တစ်​ခု ​တင်​နေ​ပါ​တယ် . ​ခ​ဏ​လေး​စောင့်​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​တင် ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​ပြ​ဿ​နာ ​တော်​တော်​များ​များ​အ​တွက်​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​အ​ခု window Live CD ​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ် . ​ဘာ့​ကြောင့် ​ကျွန်​တာ်​တို့ live CD ​ကို ​သုံး​ကြ​ရ​လဲ​ဆို​တာ​ကို ​စောင့်​ဖတ်​လိုက်​ပါ .
​ကျော်​ကျော်: ​ကို​ကို​ရေ​ဖုန်း​လာ​နေ​တယ် ​ဆို​တဲ့ ​ဟန်​ဖန်း​မည်​သံ​လေး​ကို ​တင်​ပေး​ပါ​လား
​ဖုန်း​မည်​သံ​ပါ ​တောင်း​နေ​ကြ​တယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​နောက်​ပိုင်း ​မိန်း​မ​ပါ ​ရှာ​ခိုင်း​မ​လား​မ​သိ​ဘူး . ​ကို​ကျော်​ကျော်​ရေ ​မိန်း​မ​တော့ ​မ​ရှာ​ခိုင်း​ဖို့ ​ကြို​ပြီး​ပြော​ထား​တယ်​နော် .
​အောက်​မှာ download ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
​ကို​ကို​ရေ ​ဖုန်း​လာ​နေ​တယ်​နော် . ​ကို​ကို​ရေ​ဖုန်း​လာ​နေ​ပါ​တယ်​ဆို . ​မုန်း​ချင်​စ​ရာ​ကြီး ​ခေါ်​မ​ကြား ​အော်​မ​ကြား .
​ဖုန်း​ကိုင်​ရင်​ကိုင် ​မ​ကိုင်​ရင် ​ဘယ်​လို ​သောက်​ပြ​ဿ​နာ​တက်​သွား​မ​လဲ​ဆို​တာ ​ကြည့်​လိုက် .
Download ifile.it ၊ Download multiupload
Local area connection ​မ​ပေါ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ
​မြန်​မာ​မိ​သား​စု​ဖို​ရမ်​မှာ ​ကျွန်​တော် ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​ထား​တဲ့ ​အ​ဖြေ​ကို​ပဲ ​ဒီ​မှာ ​ပြန်​ရေး​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ..
(၁) ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ပေး​လိုက်​ပါ .. ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကွန်​ပျူ​တာ​စ​ဖွင့်​ပြီး ၄ ​စ​ကန့်​လောက်​ကြ​တာ​နဲ့ delete key ​ကို​ပဲ ​ဆက်​တိုက်​နှိပ်​ထား​လိုက်​ပါ(​ဆိုက်​တိုက်​ခေါက်​နေ​ပါ) ​ခ​ဏ​နေ​ကျ​ရင် BIOS SETTING ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် ..
power management setup ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ ​ပြီး​လျှင် ​အောက်​မှာ​ပြ​ထား​တဲ့ Lan ​ကို Disable ​ဖြစ်​နေ​ရင် Enable ​ပြန်​ပြီး​လုပ်​လိုက်​ပါ .. ​အောက်​မှာ​ပုံ​လေး​နဲ့​ပြ​ထား​ပါ​တယ် ...
​ပြီး​တာ​နှင့် F10 ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ .. box ​ပေါ်​လာ​တာ​နဲ့ ​သူ​မေး​တာ​နဲ့ y ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ .. ​ပြီး​ရင် enter ​ကို​ခေါက်​လိုက်​ပါ ​ကွန်​ပျူ​တာ restart ​လုပ်​ပါ​လိမ့်​မယ် .. ​ပြီး​တာ​နှင့် lan ​မှာ local area connetion ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .. ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ ..
​ချစ်​သ​န္တာ: ​အ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ....... ​ဘ​လော့​လုပ်​တဲ့​အ​ခါ​လေ mebutab ​ကို​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​နောက်​ထပ် ​စာ​မျက်​နှာ ​တစ်​ခု ​ပေါ်​လာ​တာ ​ဘယ်​လို
<a href="http://www.nyinaymin.com/2009/09/isa-server.html" target="_blank" title="TITLE"><img src="http://img39.imagefra.me/img/img39/2/9/6/nyinaymin/f_julm_ed04620.gif" border="0" width="153" height="28" alt="Description"></a>
​အ​ပေါ်​က ​ရေး​ထား​တဲ့ ​ကုဒ်​ဟာ ​အောက်​မှာ​ပေါ်​နေ​တဲ့ ​ပုံ​စံ​လေး​ပါ . ​ခ​ရမ်း​ရောင် ​ပြ​ထား​တာ​က ​ပြောင်း​ရ​မယ့် ​နေ​ရာ​ပါ . ​ပ​ထ​မ ​ခ​ရမ်း​ရောင် ​က ​သွား​မယ့် link ​ပါ . ​ဒု​တိ​ယ ​ခ​ရမ်း​ရောင် ​က​တော့ ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​မယ့် ​ပုံ​ပါ .
​စာ​သား​အ​စား​ထိုး​ထည့်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က code ​နဲ့ ​ရေး​ပါ ..
Adminstrator account ​နဲ့ ​ပြန်​ဝင်​ချင်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ .
​စိုး​မင်း​ခန့်: ​ကျွန်​တော့်​သုံး​နေ​တဲ့ ​စက် Adminstrator Passoword ​ကို​သိ​ချင်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​လို့​ရ​နိုင်​လဲ​ဗျ .. ​ကျွန်​တော့်​သုံး​နေ​တဲ့ ​စက် Adminstrator Passoword ​ကို​သိ​ချင်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​လို့​ရ​နိုင်​လဲ​ဗျ
​ဒါ​က​တော့ ​မိုး​ကုတ်​က ​ညီ​လေး ​တစ်​ယောက်​မေး​ထား​တာ​ပါ .. Adminstrator Passoword ​ဆို​တာ​က ​ကျွန်​တော်​တို့ window xp ​စ​တင်​က​တည်း​က ​ပေး​ထား​ခဲ့​လား​ဆို​တာ​ကို ​အ​ရင်​စ​မေး​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . window xp ​စ​တင်​က​တည်း​က ​ပေး​ခဲ့​တဲ့ password ​ကို adminstrator password ​လို့ ​ခေါ်​တာ​ပါ . window ​တက်​လာ​ပြီး​ရင် User Account ​တွေ ​ရွေး​ချယ်​ဝင်​နိုင်​တဲ့ Welcome Screen ​မှာ ​ပေါ်​လာ​ရင် Ctrl + Alt + Delete (ctrl+alt ​ကို ​စုံ​နှိပ်​ထား​ရင်း​နှင့် delete ​ကို ​နှိပ်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်) ​ခ​လုတ်​အ​တွဲ​ကို ​သုံး/​လေး ​ချက်​လောက် ​ဆက်​တိုက် ​နှိပ်​လိုက်​ရင် Username ​နဲ့ Password ​ရိုက်​ထည့်​ခိုင်း​တဲ့ box ​တစ်​ကို​မြင်​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အဲ​ဒီ​နေ​ရာ​မှာ window ​စ​တင်​တုန်း​က password ​ပေး​ထား​ရင်​တော့ ​အဲ့​ဒီ့ ​ပေး​ထား​တဲ့ password ​ကို ​ရိုက်​ပြီး ​ဝင်​ရ​မှာ​ပါ . ​အ​ရင်​က ​မ​ပေး​ထား​ရင်​တော့ Username ​နေ​ရာ​မှာ Administrator ​လို့​ရိုက်​ပြီး Enter ​ခေါက်​လိုက်​ရင် Adminstrator account ​ထဲ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​တ​ကယ်​လို့ Welcome Screen ​ကို​မ​တွေ့​ရ​ဘူး ​ဆို​ရင်​တော့ ​ဝင်း​ဒိုး​တက်​တာ​နဲ့ User ​အ​နေ​နဲ့​တန်း​ဝင်​သွား​တယ်​ဆို​ရင် ​ဝင်း​ဒိုး​ကို Log Off (Start >> Log off ) ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ ။ Welcome Screen ​ဆီ​ရောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။